ထိုင်ဝမ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ထိုင်ဝမ်
မူလကအဆိုပါပေါ်တူဂီတို့က Formosa အမည်ရှိ, ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်နှင့်ခရီးသွားဧည့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်လူကြိုက်များခရီးသွားဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. ထိုင်ဝမ်က၎င်း၏စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကနေသူ့ရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမှအရာအားလုံးတို့အတွက်သတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ထိုင်ဝမ်ထက်လျော့နည်းသော်လည်း 14,000 ဧရိယာ၌စတုရန်းမိုင်, ကကျော်ဖို့နေရာဖြစ်သည် 22 လူဦးရေသန်း. ခေတ်သစ်ထိုင်ဝမ်ကျော်တရုတ်ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးအောက်ပါကျွန်းပြည်မကြီးတရုတ်နိုင်ငံသားများ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် 50 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. ထိုင်ဝမ်အစိုးရတရုတ်ပြည်မကြီး၏တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ဖို့မလုပ်ပဲပေမယ့်, ကမ္ဘာကြီးကိုနေဆဲတရားဝင်အခွင့်အာဏာအဖြစ်ပြည်မအစိုးရအသိအမှတ်ပြု.
ဒူဘိုင်း,arelatively new tourist destination, is basicallyadesert city with excellent infrastructure and superb tourist amenities. Its liberal policies as well as its convenient location just three hours away from most Asian countries and five hours away from Europe, make Dubai very popular asashort-break destination for tourists from both countries that are looking for exciting shopping, ဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်း, great partying andahost of unique sporting events. Though Dubai ca...
Are you planning to travel to Asia within the next year, & are looking for some fun festivities to attend? ကောင်းစွာ, look no further - we have researchedaquantity of the more incredible Asian festivals for you to check out during your travels.
အားလုံး Inclusive ကာရစ်ဘီယံမိသားစု Resort ကိုအကောင်းဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်တည်နေရာများ